Isisombululo seNethiwekhi yeCampus |
Isisombululo senethiwekhi yezothutho yeDCN
Inkqubo yangasemva ye-AFC ithetha iNkqubo yokuQokelelwa kweZinto eziZenzekelayo, yinkqubo yenethiwekhi ezenzekelayo yokuthengisa amatikiti, ukutshaja, ukukhangela kunye neenkcukacha-manani zendlela kaloliwe. Inkqubo isekwe kwikhompyuter, kuNxibelelwano, kwinethiwekhi kunye nolawulo oluzenzekelayo. Inkqubo ye-AFC inokwahlulahlula ...
Isisombululo senethiwekhi yeDCN
Imvelaphi Isishwankathelo I-shopper yanamhlanje ifuna-kwaye iya kutshintsha ukuthembeka kwayo kwezinye iimveliso xa ulindelo lungafezekiswanga. Ukutshintsha kweendlela zokuthenga kunyanzela abathengisi ukuba bavavanye amava abo asesitolo ukuze bangatsali abathengi abatsha kuphela, kodwa bafumane iindlela ezintsha zokugcina abathengi abakhona ...
Isisombululo senethiwekhi ye-DCN yehotele
Imvelaphi yoShishino lweeNethwekhi zeehotele Iindawo zokugcina ezikrelekrele ziba zizixhobo eziyimfuneko kubomi bethu bemihla ngemihla. Xa ukuhambo, ungadinga ukuba benze umsebenzi weofisi ukude, bathathe inxaxheba kwintlanganiso ekude, babhukishe uloliwe okanye itikiti lenqwelomoya, ukufumana nokuthumela i-imeyile, njalo njalo. Ke ngoko ...
Isisombululo seNethiwekhi yezeMpilo yeDCN
Ulwazi ngemvelaphi Kwiziko lokhathalelo lwempilo, isibhedlele sihlala sinikezela ngeenkonzo zonyango ezahlukeneyo kwisigulana, njengononophelo olungxamisekileyo, uqhaqho, ukubelekisa kunye neenkonzo zokuzalwa. Ukubonelela ngononophelo lwempilo olugqwesileyo, kusetyenziswa ubukrelekrele kunye nokuchonga isifo ...
Isisombululo seNethiwekhi yeKhampasi yeDCN
Ulwazi lwemvelaphi Ukuphuhliswa okukhawulezayo kwe-Intanethi, ngakumbi ubunyani, ilifu, obu buchwephesha buqhuba utshintsho kwimizi-mveliso yezemfundo. Ilifu lelona phawu lukhulu kwimfundo esisiseko nakwimimandla yemfundo ephezulu. Ukufikelela ngokulula kwizibonelelo zemfundo yinto ephambili ...